Dadka kufsiga geeysta oo ciqaabta lagu adkeeyn doono - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda ayaa dhowaan soo jeedisay hindise sheegaya in ciqaabka lagu adkeeyo dadka kufsiga geeysta. sawir: Junge, Heiko
Dadka kufsiga geeysta oo ciqaabta lagu adkeeyn doono
La daabacay måndag 18 december 2017 kl 10.30
Waa in dadka kufsiga geeysta lagu sii adkeeyo ciqaabta. Hindisahan ayey dawlada dalkan dhowaan soo jeediisay.
Ra´iisal wasaare Stefan Löfven, rai iisal wasaare ku xigeenka Isabella Lövin, iyo wasiirka cadaaladda Morgan Johansson ayaa shalay sidan ka sheegeey shir saxaafadeed oo ay ku qabteen magaalada Köping.
Hindisaha ay halkaas ka soo jeediyeen ayaa muujinaya in galmadu ku dhisantahay ogolaashaha iyo isku raacida labada qof.
– Galmadu ma aha wax khasab ku iman kara, labada qofii waa in ay isku raacsanaadaan, hadii kale waa dembi. Hindisahani waa mid taariikhii ah, ayuu sheegay Stefan Löfven ra´iisal wasaaraha dalkan.
Sido kale ayaa hadii la dhabeeyo hindisahan la bilaabaya in sharciga kufsiga lagu daro laba dembi oo iyaguna ciqaabka ku sii adkeeynayaa dadka geeysta xad gudubkan. Tan ayaa ka dhigan in la balaadhin doono micnaha kufsiga, ayey saddexda wasiir ka yidhaahdeen shirkan.
Ra´iisal wasaare Stefan Löfven ayaa rajeeynayaa in sharciga cusubi waxyaabo badan ku soo kordhiyo bulshada, tusaale in aragtida laga qabo dembiyadan isbedel laga arko.
Dawladda ayaa sido oo kale hore soo jeedisay dhowr hindise oo shuruudaha ku sii atkeeynaya dadka dembiyadan gala. Kuwan ayaa ah in la bilaabo isticmaalida silsilada (fotboja) oo dhaq-dhaqaaqa dadka lagu xukumay dembigan lagala socon karo iyo in muwaadiniinta iswiidhishka ah ee kufsiga geysta marka ay dalka dibadiisa joogaan la ciqaabo marka ay dalkan ku soo laabtaan.